Fanjakan'i Jamaika ao anatin'ny fizahan-tany Karaiba ary mandroso
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Fanjakan'i Jamaika ao anatin'ny fizahan-tany Karaiba ary mandroso
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Edmund Bartlett dia niresaka tamin'ny webinarin'ny mpitarika JMMB. JMMB dia banky lehibe ao Jamaika.
Bartlett dia nanome topy maso ny fanamby napetraky ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Jamaika amin'ny foto-kevitra eran-tany.
Ity kabary fanokafana maso ity dia adika eto ho toy ny transcript ary manan-kery mihoatra ny scenario Jamaika.
Vakio manontolo - na henoy - ity kabary ifotony nataon'ny Minisitra tao amin'ny webinar Thought Leadership an'ny JMMB ity.
Ny fivoaran'ny indostrian'ny fizahantany hatramin'ny taona 1950 dia azo faritana tsara indrindra ho toy ny dichotomous satria io ampahan'ny toekarena manerantany io dia maneho ny faharetana sy ny marefo; miaraka amin'ny fisehoana amin'ny elanelam-potoana tsy tapaka miaraka amin'ny tanjaka mitovy.
Amin'ny ankapobeny, ny sary nipoitra tamin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena tato anatin'ny folo taona lasa dia iray amin'ny fitomboana haingana sy tsy miova ary misy fiatraikany ara-tsosialy sy ara-toekarena maharitra. Ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena dia nitombo hatramin'ny 25 tapitrisa tamin'ny taona 1950 ka hatramin'ny 1.5 lavitrisa tamin'ny taona 2019, izay nitombo 56 heny.
Rehefa mitohy manitatra haingana sy mihabe izy ity, dia niitatra tamin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao ny fiantraikan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena ary io sehatra io dia anisan'ny mpampikatso ny asa famoronana asa, ny fihenan'ny fahantrana, ny varotra fanondranana ary ny fidiram-bola avy any ivelany. Tao anatin'ny dimy taona (talohan'ny COVID), ny sehatry ny fizahan-tany miasa mafy dia tompon'andraikitra amin'ny asa 1 isaky ny 5 noforonina.
Tamin'ny taona 2019, ity sehatra ity dia nanohana asa 330 tapitrisa na asa 1 amin'ny asa 10 manerantany. Tamin'ny taona 2019, ny fizahan-tany dia nanolotra US $ 8.9 trillion tamin'ny GDP manerantany na 10.3% amin'ny harin-karena faobe; 1.7 tapitrisa dolara amerikana ny fanondranana mpitsidika mitentina 6.8% amin'ny totalin'ny fanondranana; 28.3% amin'ny fanondranana serivisy manerantany ary 948 miliara dolara amerikana amin'ny fampiasam-bola na 4.3% amin'ny fampiasam-bola tanteraka.
Ny fiatraikany ara-tsosialy sy ara-toekarena eo amin'ny fizahantany dia miovaova arakaraka ny faritra misy ny toekarena madinidinika any Pasifika, ny Ranomasimbe Indianina ary Karaiba no isan'ny fiankinan-doha indrindra eto an-tany.
Miorina amin'ny valin'ny Index of Dependency momba ny fizahan-tany 2021 novokarin'ny Banky Iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana (IADB), i Karaiba no laharam-paritra miankina amin'ny fizahantany indrindra eto an-tany. Hitan'ny Index fa firenena am-polony mahery Karaiba ao anatin'izany Jamaika dia notanisaina tamin'ireo firenena 20 ambony indrindra miankina amin'ny fizahan-tany eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ireo toekarena amerikana latina sy karaiba hafa ampolony izay mahatratra ny 100 voalohany.
Ny fandinihana misimisy kokoa ny Tatitry ny Fiantraikany ara-toekarena tamin'ny WTTC tamin'ny taona 2020 dia naneho fa, tamin'ny vanim-potoana talohan'ny krizy, ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any amin'ny faritr'i Karaiba dia nandray anjara: USD 58.9 miliara ho an'ny harinkarena faobe (14% amin'ny harin-karena faobe); Asa 2.8 tapitrisa (mitovy amin'ny 15.2% amin'ny totalin'ny asa) ary USD 35.7 miliara amin'ny fandanian'ireo mpitsidika (mitovy amin'ny 20% amin'ny totalin'ny fanondranana).
Manoloana ny zava-misy fa ny fitomboan'ny fizahantany iraisam-pirenena dia nihoatra ny fitomboan'ny harinkarena manerantany tamin'ny taona 2019, ny tombana voalohany dia ny tahan'ny fitomboana kely 3 ka hatramin'ny 4% tamin'ny taona 2020. Mazava izany talohan'ny nielezan'ny global coronavirus vaovao, nanomboka ny volana martsa 2020, izay farany nanery ny fanidiana ny sisintany, ny fametrahana ny sidina ary ny fampiatoana ny dia iraisam-pirenena rehetra hatramin'ny aprily ka hatramin'ny jona 2020.